အားလပ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာနေရင်း ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သင့်သလဲ? - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
အားလပ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာနေရင်း ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သင့်သလဲ?0195
Usman Ghani May 28, 2020 12:03 pm June 2, 2020
အားလပ်ရက်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာလဲကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ကုန်ပါတယ်။ များသေအားဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် စျေးဝယ်တာတွေ၊ အနားယူတာတွေ၊ ထမင်းဟင်းချက်တာတွေနဲ့ကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်လောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တော့မယ်လို့ပြောနေမယ့်အစား ခုပဲမြန်မြန်စတင်လိုက်ပါ… “Milk Jug” Squats ဒါလေးကတော့ တစ်ဂါလံနွားနို့ဘူး ဒါမှမဟုတ်အအေးဘူးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုကိုင်၍ ကုလားထိုင်အနေအထားထိုင်ထပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာက မမြင်ရတဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးနောက်မတ်တပ်ရပ်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ အကယ်၍ အနေအထားမှားမည်စိုးပါက အနောက်တွင် ကုလားထိုင်တစ်ခု့ထား၍ ပြုလုပ်ပါ။
Cardio Burnout နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ထောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်စောင်းအနေအထားဖြင့် လွတ်နေသောဖက်ဖြင့် ခြေထောက်ကို ထိခြင်းကို အနည်းဆုံး ၁၀ကြိမ် အများဆုံး အကြိမ် ၂၀ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လက်မောင်း ခြေထောက်နှင့် ဝမ်းဗိုက်ရှိ အဆီများကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
4-Move ၃ မိနစ် Cardio လေ့ကျင့်ခန်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ Cardio နှင့်အတူ – froggers, bird-dog crunches နှင့် three-point toe touch – များကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီမိနစ် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ cardio လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (အပြေးမလိုအပ်)၊ ထို့ကြောင့်ချွေးထွက်လိုလျှင် သင်၏ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကို အခြေခံ၍ အနားယူချိန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စတင်ခါစသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။
Shop မှာ အိမ်မှာနေရင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
ဝယ်ယူရန် – Link
Previous Article6 Ways To Improve Your Online Apparel Business to Make More Sales!Next ArticleBlender တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်
အမေများနေ့တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြရန်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးများ ….